दिनेश गौतम काठमाडौं, ३ जेठ
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको चौथो तला । सिसाको ढोकामा लेखिएको छ- ‘अनुमतिविना प्रवेश निषेध !’
भित्र पीपीईसहित स्वास्थ्यकर्मीहरू कोरोनाको परीक्षण गरिरहेका छन् । रिपोर्ट पोजिटिभ, नेगेटिभ के आउँछ ? त्यो उनीहरूकै हातमा छ । जिल्लाजिल्लाबाट परीक्षणका लागि स्वाब पनि आइरहेको छ ।
कोरोना परीक्षण टिमको नेतृत्व गरिरहेका छन् डा. रञ्जित साहले । २ महिनायता उनको दैनिकी नै फेरिएको छ । बिहानदेखि राती १२-१ बजेसम्म पनि उनी प्रयोगशालाकै ल्याबमा हुन्छन् । पहिलो संक्रमितदेखि चीनबाट उद्धार गरेर ल्याइएका विद्यार्थी, प्रधानमन्त्री, नेता, सांसदसम्मको परीक्षण उनैले गरेका छन् ।
को हुन् यी डा. रञ्जित ? जो युद्ध स्तरमा कोरोनाको परीक्षणमा खटिएका छन् ।
हामी प्रयोगशाला पुग्दा उनी व्यस्त थिए । मध्याह्नको १२ बजेको थियो । झण्डै १ घण्टापछि उनले समय निकाले ।
‘राती अवेरसम्म ल्यबमै थिएँ । तपाईंलाई धेरैबेर कुराएँ । सरी है ! हिजोआज समय, खाने बस्नेको ठेगान नै छैन । भर्खर अण्डा र चिउराले आँत भिजाएँ’, मुस्कुराउँदै उनले कुराको पोयो फुकाए ।
‘कोरोना परीक्षणको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ, कसरी काम हुँदै छ ?’, हामीले सोध्यौँ ।
‘सुरुका दिनमा डर थियो, जोखिम थिएन । अहिले डर छैन, जोखिम धेरै छ’, उनले घुमाउरो उत्तर दिए ।
चीनको वुहानमा कोरोना भाइरस (कोभिड- १९) आगो जसरी फैलिइरहेको थियो । भाइरस विस्तार भएर युरोप, अमेरिका छिरेको थियो । शक्ति राष्ट्रहरूमा मान्छे मरिरहेका थिए । स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर थियो । तर, नेपालमा संक्रमित भेटिएका थिएनन् । अन्योलको स्थिति थियो । त्यो बेला डर धेरै थियो ।
१३ जनवरीको कुरा हो । शुक्रराज ट्रपिलक तथा सरुवा रोग अस्पतालमा नयाँ केस आयो ।
अस्पतालले ती बिरामीको हिस्ट्री लियाे ।
‘म चीनको वुहानबाट आएको हुँ । विद्यार्थी हुँ । पढ्न गएको थिएँ । त्यहाँ अहिले नयाँ प्रकारको भाइरस फैलिएको छ । मान्छे मरिरहेका छन् । मलाई पनि रुघा-खोकी छ’, ती व्यक्तिले भने, ‘कतै मलाई पनि त्यही भाइरस हुन सक्छ । त्यसैले उपचारका लागि आएको हुँ ।’
त्यसपछि उनलाई त्यहीँ भर्ना गरियो । लक्षण हेर्दा इन्फ्लुएन्जाको जस्तो देखियो ।
ती व्यक्तिको २ पटक इन्फ्लुएन्जाको परीक्षण गरियो । परीक्षणका लागि स्वाब डा. रञ्जितले नेसनल इन्फ्लुएन्जा सेन्टरमा झिकेका थिए । उनलाई साथ दिएकी थिइन् सुनी डंगोलले । न त पीपीई, न मास्क नै लगाएका थिए । साधारण रूपमै उनले ती व्यक्तिको स्वाब झिकेर परीक्षण पनि उनैले गरे ।
तर, रिपोर्ट आयो नेगेटिभ ।
ती व्यक्तिका आँखा पनि राता भएका थिए । रुघा र सुख्खा खोकी पनि छ । स्वासप्रस्वासमा समस्या पनि छ । चीनमा देखिएको लक्षणसँग मिल्दोजुल्दो छ । कतै कोभिड- १९ नै त होइन ? उनले र टेकु अस्पतालका डा. अनुप बाँस्तोलाले छलफल गरे ।
२ पटक परीक्षण गर्दा पनि रिपोर्टमा केही नदेखिएपछि अब के गर्ने ?
अन्तिममा निर्णय गरे- अब कोभिडको परीक्षण गर्ने । तर, परीक्षणका लागि नेपालमा सम्भव थिएन । कहाँ पठाउने ?
अन्योलको भुमरीमा डाक्टरहरू नै परे ।
त्यसपछि डब्लूएचओ, इडीसीडी, एनपीएचएल र टेकु अस्पतालको सहमतिमा उनको स्वाब परीक्षणका लागि हङकङ पठाउने निर्णय भयो ।
ती व्यक्तिको स्याम्पल हङकङ पठाइयो । त्यहीबीचमा ती बिरामी पनि निको भए ।
चीनको वुहानमा कोरोना भाइरस फैलिएको बारे डा. रञ्जित जानकार थिए । सुरुको चरणमा डब्लूएचओ र चीनले भाइरस मान्छेबाट मान्छेमा सर्दैन, मान्छे र जनावरमा सर्छ भनेको थियो । उनले कोभिडको नियमित फलो गर्दै अध्ययन, अनुसन्धान पनि गरिरहेका थिए ।
हङकङबाट २४ जनवरीमा ती व्यक्तिको रिपोर्ट आयो । रिपोर्ट थियो पोजिटिभ । यता ती व्यक्तिको रिपोर्ट पोजिटिभ आयो उता डब्लूएचओले अर्को सूचना निकाल्यो- यो भाइरस मान्छेबाट मान्छेमा सर्छ ।
‘ह्वाट !’, डा. रञ्जित झल्याँस्स भए । कारण, उनले ती व्यक्तिको स्वाब निकालेका थिए । त्यो पनि विनापीपीई ।
उनी तनावमा परे ।
के गर्ने ? कसो गर्ने ? मन बेचैन भयो । दिन र रात नै तनावमा बित्यो । शरीर छाम्दा तातो । थर्मोमिटरले नाप्दा ज्वरो देखिँदैन । ज्यानै जान्छ भन्ने डर ।
उनलाई आफ्नोभन्दा पनि अरूको चिन्ताले ज्यादा सतायो ।
‘मबाट अरूलाई सरको रहेछ भने के गर्ने ?’, उनी पुकार्न थाले, ‘हे भगवान् ! मलाई सरेको भए पनि अरूलाई नसरोस् ।’
त्यसपछि आफूबाट स्टाफ, घरपरिवार र साथीलाई नसरोस् भनेर उनी १४ दिन क्वारेन्टाइन बसे ।
‘नेपालमा पनि कोरोना देखियो, अब के गर्ने ?’
केही दिनपछि सरकारले कोरोना टेस्ट गर्ने रिएजेन्ट ल्यायो । पहिलो टेस्ट पहिलो व्यक्तिको स्याम्पलबाट गरियो । हङकङमा गर्दा पोजिटिभ देखिएको नेपालमा गर्दा पनि पोजिटिभ नै देखियो । नेपालमा ल्याएको मेसिनले राम्रो काम गर्छ भन्ने कन्फर्म भयो ।
डा. रञ्जितको मनमा आशाको दियो बल्यो ।
उनीसहित साथीहरूको परीक्षण उनैले गरे । सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आयो । फेरि दोस्रो पटक परीक्षण गरे, रिपोर्ट नेगेटिभ नै आयो ।
अघिसम्म डरले बढेको ढुकढुकीमा अहिले खुसीको धड्कन धड्किन थाल्यो । त्यसपछि उनले लामो सास लिए । आफूलाई कोरोना नसरेकामा उनी ढुक्क भए ।
२६ जनवरीबाट प्रयोगशालामा कोरोना परीक्षण हुन थाल्यो । कोरोना भाइरस परीक्षण गर्ने टिमको नेतृत्व पनि उनैको काँधमा आयो ।
नेतृत्व त लिए तर जति केस आउँथे, ती सबै नेगेटिभ रिपोर्ट आउँथे । परीक्षण हुन थालेको १-२ महिना बित्यो, किन पोजिटिभ आएन ? भनेर प्रश्न आउन थाल्यो ।
त्यो बेला उनी निरास भए । रिपोर्ट नेगेटिभ आएर होइन, किन पोजिटिभ आएन ? भनेर समाजका अग्रज व्यक्तिबाट नै आउने प्रश्नको झटारोले ।
‘काम गर्न जानेको छैन कि के हो ?’, उनीमाथि प्रश्न उठ्यो ।
सुरुमा १० वटा स्याम्पल आएका थिए । ती सबै परीक्षणका लागि फेरि हङकङ पठाइयो । हङकङमा गर्दा पनि नेगेटिभ नै आयो । त्यसपछि फेरि आएका ८ वटा केसको स्याम्पल पनि हङकङ पठाइयो, त्यो पनि नेगेटिभ आयो । नेपालमा गर्दा पनि नेगेटिभ रिपोर्ट नै आएको थियो ।
उनी भने आफ्नो कामप्रति विश्वस्त थिए ।
ल्याबमै डब्लूएचओले आएर सबै निरीक्षण ग¥यो । परीक्षण ठीक छ भनेर छाप लगायो अनि उनीमासथ प्रश्न गर्नेहरूको प्रश्न बन्द भयो ।
तथापि, उनी आफ्नो कर्तव्यबाट पछि हटेनन् ।
चीनको वुहानमा नेपाली विद्यार्थी अलपत्र परे । नेपाल ल्याउन हारगुहार चल्यो । ल्याएर कहाँ राख्ने, के गर्ने ? अन्योल थियो । अन्त्यमा नेपाल सरकार उनीहरूलाई ल्याउन तयार भयो ।
उनीहरूका लागि भक्तपुरमा क्वारेन्टाइन बनाएर राखियो । भाइरस सर्छ भनेर वरिपरिका स्थानीयले घरसमेत छाडेका थिए । अरू मान्छे जाने त कुरै भएन, खाना दिने मान्छे पनि थिएनन् । कोही पनि जान मानेका थिएनन् । परीक्षण कसरी गर्ने, के गर्ने ? अन्योल थियो ।
अन्ततः परीक्षणको नेतृत्व डा. रञ्जितले नै लिए ।
एक दुई दिन पीपीई कसरी लगाउने ? कसरी स्वाब झिक्ने ? कसरी सुरक्षित रहने भनेर उनको टिमलाई ट्रेनिङ दिइयो । त्यसपछि उनको टोली ती विद्यार्थीको स्वाब सङ्कलन गर्न खटियो ।
त्यो क्वारेन्टाइनमा पहिलो पाइला टेक्ने व्यक्ति डा. रञ्जित नै थिए ।
पीपीईसहित पुगेको थियो उनको १० जनाको टोली । उनको टोली पुग्दा विद्यार्थीको मुहारमा खुसी छाएको थियो ।
डा. रञ्जितले सम्बोधन गरे, ‘हामी तपाईंहरूको स्वाब सङ्कलन गर्न आएका हौँ । सहयोग गर्नुहोस् । स्वाब नझिकेसम्म केही नखानुहोस् ।’
ती विद्यार्थीहरूले दिनभर भोकै बसेर स्वाब झिक्न सहयोग गरे । १ सय १७ जनाको स्वाब सङ्कलन गरेर डा. रञ्जितको टोली अपराह्न ४ बजे भक्तपुरबाट फर्कियो । अन्त्यमा विद्यार्थीले ताली बजाएर उनको टोलीलाई बिदाइ गरे ।
आफ्नो कामप्रति डा. रञ्जित गर्व गर्छन् ।
भोलिपल्टबाट ती विद्यार्थीको परीक्षण सुरु भयो । उनको टोली परीक्षणमा खटियो । एकपछि अर्को रिपोर्ट नेगेटिभ आयो अनि ती विद्यार्थी पनि ढुक्क भएर आआफ्नो घर फर्किए ।
जति परीक्षण गरे पनि रिपोर्ट नेगेटिभ नै आइरह्यो ।
अन्य देशहरूमा हवाईमार्गबाट आउनेहरूमा कोरोना भाइरस देखिन थाल्यो । कतिपय देशहरूले हवाईमार्ग बन्द गर्न थालेका थिए ।
त्यहीबीचमा फ्रान्सबाट आएकी प्रसिद्धी श्रेष्ठ टेकु पुगिन् ।
‘मसँगै जहाजमा आएका व्यक्तिमा कोरोना पोजिटिभ देखियो । त्यसैले म पनि परीक्षणका लागि आएको हुँ’ भन्दै प्रसिद्धी आफैैँ टेकु पुगेकी थिइन् ।
प्रसिद्धीको स्याम्पल टेस्ट प्रयोगशालामा गरियो । उनको रिपोर्ट पोजिटिभ आयो । त्यसपछि नेपालमा डर र त्रास बढ्न थाल्यो । पोजिटिभ केसहरू एकपछि अर्को देखिन थाले । अहिलेसम्म ६५ वटा पोजिटिभ केस त डा. रञ्जितले नै निकालेका छन् ।
‘यति धेरै स्वाब परीक्षण गर्दा डर लागेन ?’
‘रिस्क त हुन्छ नै, जोखिम पनि छ । विदेशमा कति डाक्टर, नर्सको मृत्यु भइसकेको छ । पीपीई लगाउँछौँ तर पहिलेको जस्तो डर र त्रास भने छैन’, उनी भन्छन्, ‘भाइरस स¥यो भने पनि योङलाई त्यति असर गर्दैन भन्ने बुझेको छु । लागे पनि ठीक हुन्छ ।’
‘कति घण्टा ल्याबमा बस्नुहुन्छ ?’
‘यति नै समय भन्ने छैन । बिहान १० बजे आएर बेलुका १२-१ बजेसम्म पनि बस्नुपर्छ । म मात्र होइन, टिम छ । टिमले मिलेर काम गर्छौं’, उनले भने ।
प्रयोगशलाको नेतृत्व डा. रुना झाले गरेकी छन् भने कोरोना परीक्षणको नेतृत्व डा. रञ्जितले । उनको टिममा सुनी डंगोल, रचना मेहेता, त्रिभुवनप्रसाद साह, स्मृति श्रेष्ठ, विमलेश झा, डा. मनिसा कुमारी, डा. जुनु राई, कञ्चन ओझा, नवीन पन्त, डा. नयानुम पोखरेल, डा. शोहनी बज्रचार्य र महेश अधिकारी छन् ।
उनी टिमको कामप्रति विश्वास गर्छन् ।
‘घरमा कुरा हुन्छ ?’
‘हुन्छ नि ! बुबाआमाको मन न हो, जागिर छोड भन्नुहुन्छ । यो जागिरले के हुन्छ ? भन्नुहुन्छ । छोराछोरोकी माया कसलाई हुँदैन र ! मैले पढेको यही हो । यस्तो समयमा देशका लागि मैले गरिनँ भने कसले गर्ने ?’
परिवारलाई सम्झिँदा उनी मौन बन्छन् ।
कोरोना भाइरस भेटिएपछि उनी परिवारबाट टाढै बस्छन् । काठमाडौंमा दाजुसँगै बस्दै आएका थिए । दाजु पनि डाक्टर । तर, यसबेला दाजुको भन्दा उनको आवश्यकता धेरै छ । त्यसैले दाजुलाई घर पठाएर उनी कोरोना परीक्षणमा खटिएका छन् । यदि आफूलाई केही भए दाजुलाई केही नहोस् भनेर उनले घर पठाएका हुन् ।
‘मलाई केही भयो भने बुबाआमालाई कसले हेर्छ ? अनि दाजुलाई घर पठाएँ’, डा. रञ्जित स्तब्ध हुन्छन् ।
घरभेटीले समेत उनलाई ‘के छ ?’ भनेर सोधिरहन्छन् । मलिन स्वर भए ‘सन्चो भएन कि के हो ?’ भनेर घरभेटीबाट उनलाई प्रश्न आउँछ ।
अहिले उनका अभिभावक घरभेटी बनेका छन् ।
‘यही पेसा किन ?’
सानोमा उनी पढाइमा तेज थिएनन् । विद्यालय जान नमान्ने । ५ कक्षामा पुग्दा पनि केही नजान्ने । बुबा शिक्षक । राम्रो परिवार थियो । तर, पढाइ उनको उम्दा थिएन ।
गाउँमै बोर्डिङ स्कुल खुल्यो । ५ कक्षामा पढ्ने उनले फेरि नर्सरीबाट पढ्न सुरु गरे । शिक्षकको हातबाट पिटाइ पनि खान्थे । एक दिन उनी हनुमान चालिसा पढ्दै थिए । उनको मन परिवर्तन भयो । हनुमान चालिसा पढेपछि पढ्नुपर्छ भन्ने चेत आयो । त्यसपछि उनले विद्यालय तहमा कहिल्यै दोस्रो हुनुपरेन । पहिलो नै हुन्थे ।
उनी सिरहाको कल्याणपुरमा बिताएको बाल्यकालमा पुग्छन् ।
एसएलसीपछि उनी विज्ञान विषय पढ्न काठमाडौं आए । उनलाई न्युक्लिएर साइन्स पढ्न मन थियो । बम बनाउन मन थियो । तर, त्यस समयमा देशमा गृहयुद्ध चलिहरेको थियो । परिवारले पढ्न दिएन । माओवादीले लैजान्छ भनेर उनको परिवारले पढ्न दिएन । त्यसपछि एमबीबीएस पढ्न उनी बङ्गलादेश गए । पढ्न जाँदा ५-६ महिना ढिला भएको थियो तर पनि मिहिनेत गरे । उनले ३-४ वटा विषयमा गोल्ड मेडलसमेत हात पारे ।
एमबीबीएस सकेर आएपछि वीर अस्पताल र त्रिवि शिक्षण अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा काम गर्न थाले । उनलाई फेरि ल्याब पढ्न मन लाग्यो । उनले टिचिङमा ल्याब पढ्न नाम निकाले । उनले ल्याब पनि पढे ।
टिचिङमा पढ्दा उनी भ्यागुत्ते रोगको परीक्षणमा पनि खटिएका थिए । भ्यागुत्ते रोग डरमर्दो थियो । मान्छेको ज्यानै लिन्थ्यो । तर, उनले त्यसबेलमा पनि निर्भिक भएर भ्यागुत्ते रोगको अनुसन्धान गरेका थिए । डेँगु, स्क्रफटाइफसको पनि उनले अनुसन्धान गरेका छन् ।
फेरि उनलाई सरुवा रोगको अध्ययन गर्न मन लाग्यो । सरुवा रोगको अध्ययनका लागि उनी भारतको मेदान्त हस्पिटल गए । मेदान्त हस्पिटलबाट उनी सरुवा रोग विशेषज्ञ भएर नेपाल फर्किए ।
पढाइमा एकपछि अर्को सफलता हात पारे ।
उनी इन्टरनेसनल जर्नलहरूमा लेख्ने र विभिन्न रोगहरूको अनुसन्धान गर्ने काम गर्थे । अनुसन्धानका लागि प्रयोगशालामा कर्मचारी मागियो । उनले पनि आवेदन दिए ।
उनी प्रयोगशालामा अनुसन्धानका लागि करारमा छिरेका हुन् । यहीबीचमा कोरोना भाइरसको महामारी फैलियो । सरुवा रोगको विशेषज्ञ भएकाले उनैको नेतृत्वमा अहिले कोरोना भाइरसको परीक्षण भइरहेको छ । कोरोना फ्रन्टमा उनी नै हुन्छन् ।
पढ्ने हुटहुटी उनको अझै सकिएको छैन । अहिले उनले हार्वर्ड युर्निभर्सिटीमा रिसर्चरमा नाम निकालेका छन् । अमेरिकालगायत अन्य देशबाट समेत उनलाई अफर आएको छ । बुबाको इच्छा मेडिसिन डाक्टर बनोस् भन्ने छ । फेरि मेडिसिन पढ्ने उनको रहर छ ।
‘कोरोनाको महामारी छ । अहिले आफ्नो देशका लागि गर्दै छु । पैसा त पछि पनि कमाउन सकिन्छ । जोसँग विद्या हुन्छ, ऊसँग लक्ष्मी हुँदैन । जोसँग लक्ष्मी हुन्छ, ऊसँग विद्या हुँदैन’, उनी दार्शनिक कुरा गर्छन् ।
अन्त्यमा उनले भने, ‘अहिले हेलचेक्र्याइँ नगरौँ । कोरोना भाइरस लाग्नबाट जोगिऔँ । नियमित हात धुने, मास्क लगाउने गरौँ । हामीलाई हतोत्साही होइन, योबेला काम गर्न हौसला चाहिएको छ ।’
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ ३, २०७७, ०७:५२:००